Gmata ihe Mkpuchi Ahụ Isi nke Ndị Ọrụ Ahụhụ Ahụ Ngwọta OMG
Site na igwefoto teknụzụ dị elu dị n'ubu ndị uwe ojii, a ga-enyocha omume nke ndị nnọchi.
Nsogbu nke abuo bu ihe ana akpo pre-ndekọ. Yabụ na ịgbame igwefoto n'ọrụ na nkeji gara aga dị - nke bara uru maka ịghọta ọnọdụ - igwefoto ahụ ga na-agba ọsọ mgbe niile. Ndị na - echedo data na - ahụ ya dị ka njigide data ọhụụ. Okwu a yiri ihe dị oke elu. Na njigide nke ekwentị ekwentị, a na-edekọ omume nkwukọrịta nke ndị niile dịkarịa ala izu isii. N'aka nke ọzọ, ọ bụ ihe gbasara ịkpachapụ anya banyere ihe onyonyo na ụda nke sekọnd 60 - nke a nọ n'ọnọdụ ebe ndị uwe ojii anaghị eme ihe nzuzo na nzuzo.
"Teknụzụ dị ya mere ọtụtụ ngalaba ndị uwe ojii na steeti na mba ahụ ga-enwe kamera mmadụ, nwee vidiyo site n'ụzọ ndị ọrụ anyị, iji hụ ihe ha na-achọ,"
Ojiji igwefoto aru putara ihe ndere nke ihe a na-ahu anya nke oma tinyere ihe ya na ndi mmadu amata. N'ime mmekọrịta ndị a, enwere ike idekọ aha, agbụrụ, agbụrụ, agba ma ọ bụ afọ nke onye ahụ. Ndekọ ndị a, na mgbakwunye na teknụzụ ọhụụ nke nyocha vidiyo na njirimara ihu, na-enye ndị mmanye iwu aka inweta ọkwa a na-enwetụbeghị ụdị ya na njirimara mmadụ. A na-ewere ozi ọ bụla gbasara 'ihe ndị pụrụ ịmata banyere ya' dị ka ihe pụtara na Nchedo Ozi Nkeonwe yana Elektriki Elektrik (PIPEDA).
Nkebi nke 7 nke PIPEDA na-enye na "enwere ike ịnakọta ozi onwe onye na-enweghị ihe ọmụma na nkwenye nke onye ahụ", belụsọ, n'etiti ihe ndị ọzọ, "nnakọta ahụ nwere ezi uche maka ebumnuche metụtara nyocha banyere mmebi nke nkwekọrịta ma ọ bụ mgbochi nke iwu gọọmentị ma ọ bụ nke mpaghara “. Agbanyeghị, ndị uwe ojii na-ejide mmadụ ọ bụla enyochaghị ya. Na nkwanye ugwu na ozi nke ozi nkeonwe anyi, ihe eji eme igwe oyuyo apughi idebe ya site na iwu nke iwu. Iji teknụzụ a mee ihe n'efu ga-emebi echiche nke nzuzo.
Ihe ịma aka a bụ ịnakọta nkwupụta nke ndị akaebe na ndị ọ metụtara. Anyị achọpụtala na ndị mmadụ anaghị achọ ịgba akaebe dịka ndị akaebe n'ihi na ha ma na e sere vidiyo ha. Peoplefọdụ ndị mmadụ na-ajụ ike idekọ. Ndị ọzọ na-anwa ime ka ilepu igwefoto ahụ. Ekwesịrị iji aka mee ka igwefoto rụọ ọrụ bụ ihe ịma aka n'onwe ya. Maka… ndị isi ndị akatabeghị ha, ha ga-amụta etu ha si arụ ọrụ ma cheta otu ha ga-esi mee ya n'ọnọdụ nnukwu nrụgide. Nchọpụta ahụ gosiri na ndị ọrụ uwe ojii chọrọ karịa ma ọ bụ erughị ọkara afọ maka ịmegharị igwefoto ghọrọ ihe eke.
Gmata Ihe Ndị Ọrụ Ahụ-Na-Ebu Egwu gbanwere ikpeazụ: December 2nd, 2019 by admin
Nzuzo 3046 18 Echiche Taa
Abamuru nke Ahụ igwefoto aru site na ulo oru
Oku nke ndi Cameron Ara-Worn